UN (R2P)တပ်များ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာဆာဆာခေါ်ပြီ…. – Real News
UN (R2P)တပ်များ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာဆာဆာခေါ်ပြီ….
UN (R2P)တပ်များ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာဆာဆာခေါ်ပြီ
ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာဆာဆာက ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကို R2P အရ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကာကွယ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါပြီ။
Responsible to Protect (R2P) ဆိုတာဟာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံက လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု၊ စစ်ပွဲတွေနဲ့ လူသားမျိုးနွယ်စုအပေါ် ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေ တစ်နည်းပြောရရင် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရတာတွေကို အကာအကွယ်ပေးဖို့ ကုလသမဂ္ဂ(UN) အဖွဲ့ကနေ တပ်စေလွှတ်ပေးတာကို ဆိုလိုတာပါ။
R2P တောင်းဆိုဖို့အတွက် မဏ္ဍိုင် ၃ ခုရှိပြီး လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံက အခြေအနေတွေက ဒီမဏ္ဍိုင်တွေနဲ့ အကြုံးဝင်နေတာကြောင့် အခုလို တောင်းဆိုလို့ရနိုင်ဖွယ် ရှိနေတာပါ။
မတ်လ ၄ ရက်နေ့ ရက်စွဲနဲ့ တောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပြီး ကုလသမဂ္ဂ ပဋိညာဉ်စာချုပ်အရ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရမှုတွေကနေ ကာကွယ်ပေးဖို့၊ သက်ဆိုင်ရာ ဒေသတွင်းအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး R2P ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ပြောဆိုထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အရေးယူပိတ်ပင်မှုတွေ ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်း စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုတင်မကပဲ သူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပါ ပိတ်ပင်ပေးဖို့ ပြောဆိုထားပါတယ်။စစ်တပ်ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့ ဒေသတွေမှာ ပိုပြီးထိခိုက်မှုတွေမဖြစ်အောင်စစ်လက်နက်ပစ္စည်း ဝယ်ယူ ကုန်သွယ်ခွင့်ကိုလည်း လုံးဝပိတ်ပင်ဖို့ကို တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
R2P အရ ကုလသမဂ္ဂတပ်ဖွဲ့တွေက နိုင်ငံပေါင်း ၈၀ အထိ အကာအကွယ်ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာဆာဆာကိုတော့ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPH က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်နေ့မှာ ခန့်အပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
UN (R2P)တပျမြား ကုလသမဂ်ဂ အထူးကိုယျစားလှယျ ဒေါကျတာဆာဆာချေါပွီ
ကုလသမဂ်ဂ အထူးကိုယျစားလှယျ ဒေါကျတာဆာဆာက ကုလသမဂ်ဂလုံခွုံရေးကောငျစီကို R2P အရ မွနျမာနိုငျငံသားတှကောကှယျပေးဖို့ တောငျးဆိုလိုကျပါပွီ။
Responsible to Protect (R2P) ဆိုတာဟာ နိုငျငံတဈနိုငျငံက လူမြိုးတုံးသတျဖွတျမှု၊ စဈပှဲတှနေဲ့ လူသားမြိုးနှယျစုအပျေါ ကြူးလှနျတဲ့ရာဇဝတျမှုတှေ တဈနညျးပွောရရငျ လူ့အခှငျ့အရေး ခြိုးဖောကျခံရတာတှကေို အကာအကှယျပေးဖို့ ကုလသမဂ်ဂ(UN) အဖှဲ့ကနေ တပျစလှေတျပေးတာကို ဆိုလိုတာပါ။
R2P တောငျးဆိုဖို့အတှကျ မဏ်ဍိုငျ ၃ ခုရှိပွီး လကျရှိမွနျမာနိုငျငံက အခွအေနတှေကေ ဒီမဏ်ဍိုငျတှနေဲ့ အကွုံးဝငျနတောကွောငျ့ အခုလို တောငျးဆိုလို့ရနိုငျဖှယျ ရှိနတောပါ။
မတျလ ၄ ရကျနေ့ ရကျစှဲနဲ့ တောငျးဆိုထားတာဖွဈပွီး ကုလသမဂ်ဂ ပဋိညာဉျစာခြုပျအရ မွနျမာနိုငျငံသားတှကေို လူ့အခှငျ့အရေး ခြိုးဖောကျခံရမှုတှကေနေ ကာကှယျပေးဖို့၊ သကျဆိုငျရာ ဒသေတှငျးအဖှဲ့အစညျးတှနေဲ့ ပူးပေါငျးပွီး R2P ဆောငျရှကျပေးဖို့ ပွောဆိုထားပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ အရေးယူပိတျပငျမှုတှေ ပွုလုပျတဲ့အခါမှာလညျး စဈခေါငျးဆောငျတှကေိုတငျမကပဲ သူတို့နဲ့သကျဆိုငျတဲ့လုပျငနျးတှကေိုပါ ပိတျပငျပေးဖို့ ပွောဆိုထားပါတယျ။စဈတပျထိုးစဈဆငျနတေဲ့ ဒသေတှမှော ပိုပွီးထိခိုကျမှုတှမေဖွဈအောငျစဈလကျနကျပစ်စညျး ဝယျယူ ကုနျသှယျခှငျ့ကိုလညျး လုံးဝပိတျပငျဖို့ကို တောငျးဆိုလိုကျပါတယျ။
R2P အရ ကုလသမဂ်ဂတပျဖှဲ့တှကေ နိုငျငံပေါငျး ၈၀ အထိ အကာအကှယျပေးခဲ့ပွီး ဖွဈပါတယျ။ဒေါကျတာဆာဆာကိုတော့ ကုလသမဂ်ဂ အထူးကိုယျစားလှယျအဖွဈ ပွညျထောငျစုလှတျတျောကိုယျစားပွုကျောမတီ CRPH က ဖဖေျောဝါရီ ၂၂ ရကျနမှေ့ာ ခနျ့အပျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
တခုခုဆို သမီးတို့ပြေး အဖွားရှေ့က ခံမယ်တဲ့လားဗျာ ….
မိသားစုတွေအပြင် ပရိတ်သတ်တွေပါ စိုးရိမ်ပူပန်နေကြလို့ လက်ရှိအခြေနေလေးကိုပြောပြလိုက်တဲ့ ပိုင်တံခွန်